आकाशमा उड्दाउड्दै पाइलटको ड्युटी सकिएपछि पाइलटले गरे यस्तो काम यात्रु सबै चकित ! - ramechhapkhabar.com
आकाशमा उड्दाउड्दै पाइलटको ड्युटी सकिएपछि पाइलटले गरे यस्तो काम यात्रु सबै चकित !
७ मंसिर नेपालगञ्ज ।
नेपाल एयरलाइन्सको ट्विन अटर विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रुकुमको चौरजहारी उडान भर्ने अनुमति पाइसकेको थियो । दिउँसो ३ बजे उड्नुपूर्व यात्रु विमानमा बसिसकेका थिए ।
शेर्पा यती समूहबाट हालै नेपाल एयरलाइन्समा अनुबन्ध भएका पाइलट हुन् ।
पाइलटले यात्रुलाई गन्तव्यमा नपुरयाएपछि उनीहरूलाई नेपालगञ्जकै होटलमा बस्ने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । निगम स्रोतका अुनसार, पाइलटका सनकका कारण अलपत्र यात्रुलाई मंगलबार बिहान नेपालगञ्जबाट रुकुम पुरयाइएको छ । (नेपाल वाचबाट साभार)